CIN Khabar कोरोना सङ्क्रमित महिलाको मृत्युले उब्जाएका सवाल
डा. रवीन्द्र पाण्डे, जनस्वास्थ्य विज्ञ आईतबार, जेठ ४, २०७७, ०८:३८:००
कोभिड १९ बाट मृत्यु भएको सिन्धुपाल्चोककी महिला टोखामा बस्थिन । प्रसव गराउन उनी बैशाख २३ गते शिक्षण अस्पताल गएकी थिइन् । २४ गते सामान्य अबस्थामा डिस्चार्ज भएकी उनी २५ गते बाह्रबिसे गएकी थिइन् । त्यहाँ उनी बिरामी भएपछि स्थानीय अस्पतालमा उपचार गराइन । उच्च ज्वरो, खोकी तथा सास फेर्न गाह्रो भएकी उनलाई स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाबाट धुलिखेल अस्पताल पुर्याइयो । त्यसको आधाघन्टामा उनको उपचारको क्रममा मृत्यु भयो ।
१. उनलाई शिक्षण अस्पताल जानुपूर्व कोरोना संक्रमण भएको हुनसक्छ । शिक्षण अस्पतालबाट सरेको भए सरेको ८-१० दिनमै मृत्यु हुने थिएन । सेप्टीसेमियाबाट मृत्यु भएको भए पिसिआर पोजिटिभ देखिने थिएन । सामान्यतया संक्रमण भएको ३–६ हप्तामा मृत्यु हुन्छ । उनलाई स्थानीय रुपमा पहिले नै लक्षणविहिन कोरोना संक्रमण भएको हुनसक्छ ।
प्रकाशित मिति: आईतबार, जेठ ४, २०७७, ०८:३८:००